ESI GBANYỤỌ FIREWALL NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Iweghachite foto na Photoshop gụnyere iwepụ ihe ụfọdụ na ntụpọ akpụkpọ anụ, ibelata mmanu mmanu na-enwu, ma ọ bụrụ na ọ bụla, yana mgbatị zuru ezu nke onyinyo (ìhè na onyinyo, mgbazi agba).
Meghee foto, ma mepụta oyi akwa abụọ.
Idebe ihe osise na Photoshop amalite site na mmanye mmanu na-enwu gbaa. Mepụta ihe efu efu ma gbanwee ọnọdụ ya agwakọta "Ọpụpụ".
Wee họrọ nro Azu ma hazie, dịka na screenshots.
Jide isi Alt, buru ihe omimi nke agba na foto. Hụ ịhọrọ oke ọhụụ, ya bụ, ọ bụghị ihe kachasị njọ ma ọ bụghị ihe dị mfe.
Ugbu a na-ekpuchi ebe ndị na-egbuke egbuke na ogwe osisi ọhụrụ ahụ. Na njedebe nke usoro ahụ, ị ​​nwere ike igwu egwu na nghọta nke oyi akwa, ma ọ bụrụ na ọ na mberede na mmetụta ya siri ike.
NDỤMỌDỤ: ihe niile dị mma ka ị rụọ na 100% foto.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ikpochapu isi nhụsianya. Mepụta otu ihe nkedo niile CTRL + ALT SHIFT + E. Mgbe ahụ họrọ ngwá ọrụ ahụ "Ịgwọ Ọcha". A na-edozi ụdị brush na ihe dịka 10 pikselụ.
Jide igodo Alt ma were akpụkpọ anụ dịka o kwere omume na nkwarụ ahụ, wee pịa na bumps (pimple ma ọ bụ freckle).
Ya mere, anyị na-ewepụ ihe ọ bụla na-adịghị mma site na akpụkpọ ahụ nke ihe nlereanya ahụ, gụnyere n'olu, na site na ebe ndị ọzọ.
A na-ewepụ ya mmiri n'otu ụzọ ahụ.
Na-esote, mee ka akpụkpọ anụ nke ihe nlereanya ahụ dị ọcha. Kpọgharịa oyi akwa na "Ederede" (ghọta ihe mechara mee) wee mepụta akwụkwọ abụọ.
Tinye nyo ka n'elu oyi akwa "Blur n'elu".
Ndị nkedo na-achọ ezigbo akpụkpọ anụ, naanị ka ha ghara imebiga ya ókè, ekwesighi ka emetụta ya. Ọ bụrụ na obere ntụpọ adịghị efu, ọ ka mma itinye ntụgharị ahụ ọzọ (megharịa usoro).
Tinye nhazi site na ịpị "OK", ma tinye ihe mkpuchi ojii na oyi akwa. Iji mee nke a, họrọ ụcha agba agba, jide igodo ahụ Alt ma pịa bọtịnụ ahụ "Tinye ihe mkpuchi vector".
Ugbu a, họrọ brush na-acha ọcha, opacity na nrụgide na-ekpughe ihe karịrị 40% ma na-aga ebe nsogbu nke akpụkpọ ahụ, na-enweta mmetụta a chọrọ.
Ọ bụrụ na nsonaazụ ahụ dị ka ihe na-enweghị afọ ojuju, a ga-emeghachi usoro ahụ site na ịmepụta oyiri ejikọta ya na nchikota CTRL + ALT SHIFT + Ema na-etinye otu usoro ahụ (oyiri oyi akwa, "Blur n'elu", nkpuchi oji, wdg).
Dịka ị nwere ike ịhụ, anyị, yana ntụpọ, bibiekwara ihe okike anụ ahụ, na-eme ka ọ bụrụ "Ncha". N'ebe a, a ga-eji aha a chọrọ "Ederede".
Kpidoghachi ihe ndozi nke ọzọ ma dọrọ akwa ahụ. "Ederede" n'elu ihe niile.
Tinye nhazi ka ịdee akwa "Ụdị Njiri".
Jiri ihe mmịfe ahụ iji nweta ngosipụta nke naanị nkọwa kacha nta nke ihe oyiyi ahụ.
Bleach na oyi akwa site na ịpị njikọ CTRL + SHIFT + Uma gbanwee ọnọdụ ya na-agwakọta ya "Gbanye".
Ọ bụrụ na mmetụta ahụ dị ike, mgbe ahụ, belata nghọta nke oyi akwa ahụ.
Ugbu a, akpụkpọ anụ ahụ na-eleba anya karịa.
Ka anyị tinye ihe ọzọ na-adọrọ mmasị ka ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ na-acha, ebe ọ bụ na mgbe ọ bụla a na-emegharị ahụ, ụfọdụ ntụpọ na enweghị ntụ na-apụta na ihu.
Kpọọ ntụpọ mgbanwe "Ọkwa" na ihe ntanetiti etiti ụda anyị na-eme ka onyinyo ahụ dịkwuo ruo mgbe agba agba nha (nkwụsị ya).
Mgbe ahụ mepee ihe niile edere, wee bido otu ndebe. A na-achọpụta akwụkwọ ahụ (CTRL + SHIFT + U) ma gbanwee usoro ngwakọta "Mmiri nchara".
Na-esote, tinye ntan ka ọ dị na oyi akwa a. "Ọhụhụ Gaussian".
Ọ bụrụ na ìhè nke foto ahụ adaghị gị, wee jiri ya ọzọ. "Ọkwa", ma ọ bụ naanị site na ịpị bọtịnụ egosiri na nseta ihuenyo.
Iji usoro a na-eme ihe, ị nwere ike ime ka anụ ahụ zuru okè na Photoshop.